Pasent 22 nke ndị njem bugara n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulPasent 22 nke ndị njem si n’ọdụ ụgbọ elu Istanbul kwaga
23 / 10 / 2019 34 Istanbul, General, Ụgbọelu, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
pasent nke ndị njem si n’ọdụ ụgbọ elu istanbul kwaga
All ọdụ ụgbọelu na Turkey, a afọ January-September oge na-gosipụtara puku 161 259 453 nde njem gaa. Pasent 22 nke ndị njem jiri ọdụ ụgbọ elu Istanbul.
N’ọdụ ụgbọ elu Istanbul, ndị njem 9 mere njem n’oge ọnwa, nde 8 nde 716 puku 822 n’usoro ụlọ na 26 nde 858 puku 68 n’usoro mpụga.
N'ime oge a, emere ụgbọ elu 35 puku 574 puku 890 ụgbọ elu na nke mba si n'ọdụ ụgbọ elu ebe a na-akwado ndị njem 222 nde 435 puku 56. Emere 324 bin 166 nke ụgbọ elu na ahịrị ime na 111 bin XNUMX na eriri dị n'èzí.
Na ọnwa itoolu, ọtụtụ puku 161 259 453 nde mmadụ na-eme njem nke na-eji Airport nke Istanbul xnumx si percent nke niile ọdụ ụgbọelu na Turkey kpebisiri ike ịnabata njem.
1 nde e mere 191 417 puku anụ ụlọ na mba ọdụ ụgbọelu na Turkey n'oge a oge. E duziri pasent 19 nke ụgbọ elu ndị a na-adabere na ọdụ ụgbọ elu Istanbul.
N'ime oge Jenụwarị-Septemba nke afọ a, ngụkọta akpa 405 puku 321 nke akpa, akwa na nzipu ozi ebubata na-ebuga ma si na ọdụ ụgbọ elu Istanbul. 64 bin 358 nke ebu ebula ahịrị site na ahịrị ụlọ ma jiri ụgbọ elu mba ụwa na-ebugharị 340 bin 963.
Na itoolu na-ọnwa oge, ngụkọta puku 2 491 872 nde tọn ibu ebuga xnumx si otú a na-ibu na oge ẹkenịmde n'ọdụ ụgbọelu dị na Turkey e mere atụmatụ na haziri njem kwagara Istanbul Airport.
Ego ụgbọelu nke 219 puku 403
Na 9 izizi n’afọ a, Airportgbọ elu Istanbul hapụkwara oge na-agwụ ike na ụgbọ elu azụmahịa. A haziri ụgbọ elu azụmahịa 55 puku 132 gụnyere 164 puku 271 na eriri dị n'ime na 219 puku 403 dị n'ahịrị dị n'ọdụ ụgbọ elu.
N'oge a, xnumx si percent nke azụmahịa flights e mere Turkey si Istanbul Airport.
1 nde ke January-September 19 259 puku azụmahịa flights e rụrụ dabeere niile ọdụ ụgbọelu na Turkey. (SAE)
Pasent 43 nke ndị njem na ụfọdụ okporo ụzọ dị na Bursa…
3. nkà na ụzụ ndị a kapịrị ọnụ na ọdụ ụgbọelu
3. Ànyị ga-ekpuchi ndị njem ahụ n'ọdụ ụgbọ elu?
Istanbul 6,2 pasent nke European Fighter Fstanbul
80 nke Istanbul Airport Emechara
Minista Arslan: "3.Airport Compleished at 73 Percentage"
Ọrụ Akụrụngwa na Çukurova Airport na-ebute 40 pasent
Pasent nke Runway na Sabiha Gökçen Airport…
Ejiri Mmanye 2,7 Mkpụrụ Obi si na Istanbul Airport
All ọdụ ụgbọelu na Turkey